New Year ညကိုနမိုးနီးယားညလို့မှားပြောမိတဲ့ မေမေကေိုအူတတ်အောင်ရယ်နေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုချပြလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး – Cele Snap
ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ……. ပြည်သူချစ်မင်းသမီးချောလေး ဖြူဖြူထွေးဟာဆိုရင် လက်ရှိမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီး လူကြိုက်များတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်……။စကားပြောပွင့်လင်းလွန်းတဲ့ ဖြူဖြူထွေးကတော့ ပရိတ်သတ်ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမပါဝင်တဲ့ဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို အကောင်းဆုံးတဲ့ အပီပြင်ဆုံးသရုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး ကြော်ငြာတွေကိုလည်းဆက်တိုက်ရိုက်ကူးလျက်ရှိနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေးကတော့ ချစ်စရာအပြုံးလေးတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်……။
ဖြူဖြူထွေးဟာဆိုရင် အနုပညာအ လုပ်ေ တွကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေ နခဲ့ပြီး ဖိတ်ကြားခံရတဲ့ပွဲေ တွကိုလည်း တက်ရောက်လျက်ရှိနေတဲ့ သူမကတော့ မြန်မာဆန်ဆန်ဖက် ရှင်လေးတွေအပြင် အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေကိုပါ ဝတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ေ ယာက်ပြဲ ဖစ်ပါတယ်။ ရယ်မော စရာကောင်းတဲ့ အခွီTiktokေ လးတွေကို ဆော့ကစားပြီး ပရိသတ်တွေေ ပျာ်ရွှင်အောင် တင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ အလှူအတ န်းတွေကို ရက်ရက်ရောရောလှူဒါန်းလေ့ရှိ သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…..။
ဖြူဖူထွေးကတော့ အခုမှာဆိုရင်လည်း Happy New Year ညကို နမိုးနီးယားညလို့မှာပြောမိတဲ့သူမရဲ့မေမေကို ကြည့်ပြီးအူတတ်အောင်ရယ်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ရယ်မောစရာကောင်းပြီး ကြည်နူးစရာကောင်းလွန်းတဲ့ သူမတို့သားအမိနှစ်ယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးဟာ ပရိတ်သတ်ရဲ့အချစ်တွေကိုပိုစေခဲ့ပါတယ်….။ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ဖြူဖြူထွေးတို့သားအမိရဲ့ ရယ်မောပျော်ရွင်စရာကောင်းတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်……။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်….။
ခ်စ္ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…….ျပည်သူခ်စ္မင်းသမီးခေ်ာလေျးဖျူဖူထြေးဟာဆိုရင် လက်ရွိမွာ အောင်ျမင်ကေ်ာ်ကြားပြီး လူကြိုက္မ်ားတဲ့ အနုပညာရွင္တစ်ယောက္ပျဲဖစ္ပါတယ်နော်……။စကာျးေပာပြင့်လင်းလြန်းတျဲ့ဖျူဖူထြေးကေတာ့ ပရိတ်သတ်ရဲ့ခ်စ္ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရွိထားတာပျဲဖစ္ပါတယ်။သူမပါဝင္တဲ့ဇာတ်ရုပ္တိုင်းကို အေကာင်းဆုံးတဲ့ အပျီပင္ဆုံးသရုပ်ဆောင္လ်က်ရွိပြီး ကြော်ျငာတြေကိုလည်းဆက္တိုက်ရိုက္ကူးလ်က်ရွိနေတျဲ့ဖျူဖူထြေးကေတာ့ ခ်စ္စရာအျပုံးလေးတြေကိုလည်းပိုင္ဆိုင္ထားတာပျဲဖစ္ပါတယ်နော်……။
ျဖျူဖူထြေးဟာဆိုရင် အနုပညာအ လုပ်ေ တြကို ဆက္လက် လုပ္ကိုင္လ်က်ရွိေ နခဲ့ပြီး ဖိတ်ကြားခံရတဲ့ပြဲေ တြကိုလည်း တက်ရောက္လ်က်ရွိနေတဲ့ သူမကေတျာ့မန္မာဆန္ဆန္ဖက် ရွင်လေးတြေအျပင် အမိုက္စားဖက်ရွင်လေးတြေကိုပါ ဝတ္ဆင်လေ့ရွိတျဲ့ပည်သူခ်စ်အနုပညာရွင္တစ်ေ ယာက္ပျဲ ဖစ္ပါတယ်။ ရယ်မော စရာကောင်းတဲ့ အခြီTiktokေ လးတြေကို ဆော့ကစားပြီး ပရိသတ်တြေ ပ်ာ်ရွှင်အောင် တင်ပေးလေ့ရွိတဲ့ သူမကေတာ့ အလှူအတ န်းတြေကို ရက်ရက်ရောရောလှူဒါန်းလေ့ရွိ သူတစ်ယောက္ပျဲဖစ္ပါတယ်နော်…..။
ျဖျူဖူထြေးကေတာ့ အခုမွာဆိုရင္လည်း Happy New Year ညကို နမိုးနီးယားညလို့မွျာေပာမိတဲ့သူမရဲ့မေမကို ကြည့်ပြီးအူတတ်အောင်ရယ်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုခ်ျပလာခဲ့တာပျဲဖစ္ပါတယ်နော်။ရယ်မောစရာကောင်းပြီး ကြည်နူးစရာကောင်းလြန်းတဲ့ သူမတို့သားအမိနွစ်ယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးဟာ ပရိတ်သတ်ရဲ့အခ်စ်တြေကိုပိုစေခဲ့ပါတယ်….။ပရိတ်သတ်ကြီးအတြက်ျဖျူဖူထြေးတို့သားအမိရဲ့ ရယ်မောပေ်ာ်ရြင္စရာကောင်းတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကျိုပန္လည်ဖော်ျပေပးလိုက္ပါတယ်နော်……။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကိုအထူးပဲကေ်းဇူးတင်ရွိပါတယ်….။